မိန်းကလေးတွေ မကြိုက်တဲ့ အမှန်တရား နည်းနည်း တော့ ခါးမယ် ဖတ် ကြည့်… – Update News
မိန်းကလေးတွေ မကြိုက်တဲ့ အမှန်တရား နည်းနည်း တော့ ခါးမယ် ဖတ် ကြည့်…
admin · Posted on April 28, 2021
ေယာက်ၤားေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အမ်ားေပ်ာ္ေအာင္ Facebook မွာျဖစ္ျဖစ္ အျပင္မွာ သူငယ္ခ်င္းဆုံရင္ျဖစ္ျဖစ္ လုလုေအာင္ေဟ့ !!! မေအးေသာင္းေဟ့ !!!စသျဖင့္ ရီစရာေတြေရးတင္ ဟာသေတြလုပ္ၿပီး Troll ေနၾကတာ…
တကယ့္အျပင္ေလာကမွာေတာ့ လုလုေအာင္ မေအးေသာင္း ဆိုရင္ ဘယ္ေကာင္မွ ဘာမွကို မခံစားရတာဗ်။ (တကယ္ေျပာတာ ဘာမွကို မခံစားရပါ) ဒါ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဂုဏ္တင္ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ေယာက္က်ားအမ်ားစု ( အမ်ားစု )ရဲ႕ ခံယူခ်က္ စိတ္ေနသေဘာထားကို ေျပာျပတာ။ က်ားသဘာဝ တို႔ Men’s Behaviour တို႔ ေယာက္က်ားစ႐ိုက္တို႔ေၾကာင့္ဘဲဗ်။
ဝတ္မႈံေ႐ႊရည္ ဘယ္လိုလွလွ ၊ ခင္သန္းႏုဘယ္လို လွခဲ့လွခဲ့ ၊ မို႔မို႔ျမင့္ေအာင္ ဘာျဖစ္ျဖစ္သူတို႔နဲ႔ နီးနီးစပ္စပ္ တခ်ိဳ႕တေလကလြဲၿပီး ဘယ္ျပင္ပေယာက္က်ားမွ သူတို႔ကို အ႐ူးအမူး ျဖစ္မေနဘူးဗ်။ေဟာ !!!
မိန္းမေတြက်ေတာ့ တမ်ိဳး ၊ ဟိုးးးးး ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္ေခတ္ ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္ႀကီးကို ႀကိဳက္ၾကလြန္းလို႔ ေ႐ႊဘီးေတြ ဆုခ်သူနဲ႔ စိန္ရင္ထိုးႀကီး ေပးရတာနဲ႔ ေနာက္ဆုံး ဘာမွမေပးႏိုင္သူက ဇာတ္စင္ေပၚတက္ ဖက္နမ္းသူက ရွိခဲ့ဖူးေသးတာ။
ဒီၾကားထဲ ေတာဖက္က မိန္းမတေယာက္က ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္ႀကီးကို အျပင္မွေတြ႕ေတာ့စိတ္ေတြ ထိန္းမႏိုင္ေတာ့ဘဲ ငိုယိုၿပီး ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္ ေဂြးက်ိ ေျပးညႇစ္ေလသတဲ့။ၾကားဖူးတာ ေျပာပါတယ္။ျမင္ေတာ့ မျမင္ဖူးဘူး သူ႔ကို မီမွမမီလိုက္တာ။
က်ေနာ္က ခုမွ ၂၂ ေက်ာ္႐ုံေလး ရွိေသးတာ….ဒီလိုဘဲ ေ႐ႊဘေခတ္ ဝင္းဦးေခတ္ ၊ ေက်ာ္ဟိန္းေခတ္ ၊ေျပၿငိမ္းေခတ္ ၊ ေဒြးေခတ္ လူမင္းေခတ္ စိုင္းစိုင္းေခတ္ ေ႐ႊထူးေခတ္ စုံေရာဘဲ။သူတို႔ မိန္းခေလးေတြဖက္ကခ်ည္း ဇြတ္ေတြ ႀကိဳက္ေနၾကတာ။
ႀကိဳက္လိုက္ၾကတာ ႀကိဳက္လိုက္ၾကတာ ဝင္းဦးေသလည္း ငို ေျပၿငိမ္းေသလည္းငို ေဒြးေသလည္းငိုအို ငိုလို႔ကို မၿပီးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တေန႔ကေတာင္ ေဒြးေသတာ (၁၁) ႏွစ္ ဆိုၿပီး လုပ္လိုက္ၾကေသးတယ္။
ဘယ္ေယာက္က်ားမွ ၾကည္ၾကည္ေဌး အလြမ္းေျပ ထမလုပ္ၾကဘူးးးးးးးးးဘယ္ေယာက္က်ားမွ ခင္ယုေမေသလို႔ ငိုမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ေယာက္က်ားမွ လုလုေအာင္ေသလို၊သင္ဇာေသလို႔ ငိုမွာမဟုတ္ဘူးဗ်။
အားလုံးပုံမွန္ပဲ အခုၾကည့္ေလ အဲ့ဒါေတြေၾကာင့္ ယြက်ားေတြထက္မိန္းမေတြ ဗူးပိုသန္တယ္ဆိုတာ ျပတာပဲ…အမွန္တရားက ခါးေတာ့ခါးတရ္။
ယောင်္ကျားတွေတော်တော်များများက အများပျော်အောင် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ် အပြင်မှာ သူငယ်ချင်းဆုံရင်ဖြစ်ဖြစ် လုလုအောင်ဟေ့ !!! မအေးသောင်းဟေ့ !!!စသဖြင့် ရီစရာတွေရေးတင် ဟာသတွေလုပ်ပြီး Troll နေကြတာ…
တကယ့်အပြင်လောကမှာတော့ လုလုအောင် မအေးသောင်း ဆိုရင် ဘယ်ကောင်မှ ဘာမှကို မခံစားရတာဗျ။ (တကယ်ပြောတာ ဘာမှကို မခံစားရပါ) ဒါ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဂုဏ်တင်ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ယောက်ကျားအများစု ( အများစု )ရဲ့ ခံယူချက် စိတ်နေသဘောထားကို ပြောပြတာ။ ကျားသဘာဝ တို့ Men’s Behaviour တို့ ယောက်ကျားစရိုက်တို့ကြောင့်ဘဲဗျ။
ဝတ်မှုံရွှေရည် ဘယ်လိုလှလှ ၊ ခင်သန်းနုဘယ်လို လှခဲ့လှခဲ့ ၊ မို့မို့မြင့်အောင် ဘာဖြစ်ဖြစ်သူတို့နဲ့ နီးနီးစပ်စပ် တချို့တလေကလွဲပြီး ဘယ်ပြင်ပယောက်ကျားမှ သူတို့ကို အရူးအမူး ဖြစ်မနေဘူးဗျ။ဟော !!!
မိန်းမတွေကျတော့ တမျိုး ၊ ဟိုးးးးး ရွှေမန်းတင်မောင်ခေတ် ရွှေမန်းတင်မောင်ကြီးကို ကြိုက်ကြလွန်းလို့ ရွှေဘီးတွေ ဆုချသူနဲ့ စိန်ရင်ထိုးကြီး ပေးရတာနဲ့ နောက်ဆုံး ဘာမှမပေးနိုင်သူက ဇာတ်စင်ပေါ်တက် ဖက်နမ်းသူက ရှိခဲ့ဖူးသေးတာ။
ဒီကြားထဲ တောဖက်က မိန်းမတယောက်က ရွှေမန်းတင်မောင်ကြီးကို အပြင်မှတွေ့တော့စိတ်တွေ ထိန်းမနိုင်တော့ဘဲ ငိုယိုပြီး ရွှေမန်းတင်မောင် ဂွေးကျိ ပြေးညှစ်လေသတဲ့။ကြားဖူးတာ ပြောပါတယ်။မြင်တော့ မမြင်ဖူးဘူး သူ့ကို မီမှမမီလိုက်တာ။
ကျနော်က ခုမှ ၂၂ ကျော်ရုံလေး ရှိသေးတာ….ဒီလိုဘဲ ရွှေဘခေတ် ဝင်းဦးခေတ် ၊ ကျော်ဟိန်းခေတ် ၊ပြေငြိမ်းခေတ် ၊ ဒွေးခေတ် လူမင်းခေတ် စိုင်းစိုင်းခေတ် ရွှေထူးခေတ် စုံရောဘဲ။သူတို့ မိန်းခလေးတွေဖက်ကချည်း ဇွတ်တွေ ကြိုက်နေကြတာ။
ကြိုက်လိုက်ကြတာ ကြိုက်လိုက်ကြတာ ဝင်းဦးသေလည်း ငို ပြေငြိမ်းသေလည်းငို ဒွေးသေလည်းငိုအို ငိုလို့ကို မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ တနေ့ကတောင် ဒွေးသေတာ (၁၁) နှစ် ဆိုပြီး လုပ်လိုက်ကြသေးတယ်။
ဘယ်ယောက်ကျားမှ ကြည်ကြည်ဌေး အလွမ်းပြေ ထမလုပ်ကြဘူးးးးးးးးးဘယ်ယောက်ကျားမှ ခင်ယုမေသေလို့ ငိုမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်ယောက်ကျားမှ လုလုအောင်သေလို၊သင်ဇာသေလို့ ငိုမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။
အားလုံးပုံမှန်ပဲ အခုကြည့်လေ အဲ့ဒါတွေကြောင့် ယွကျားတွေထက်မိန်းမတွေ ဗူးပိုသန်တယ်ဆိုတာ ပြတာပဲ…အမှန်တရားက ခါးတော့ခါးတရ်။
အရက်ဆိုင် မှာ စားပွဲထိုး လုပ်ခဲ့ရပေမယ့် ငယ်ဘဝ အိပ်မက်ကို တည်ဆောက် နိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ လူငယ် တဦး
နောက်ဆုံး အချိန်အထိ တိုင်အောင် မင်းတပ် မြို့လေးကို အစွမ်းကုန် ခုခံကာကွယ် ပေးရင်းနဲ့ပဲ အသက် ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်းလေး အကြောင်း
ကျွန်တော်၏ မိခင်၊အစ်ကိုတို့မှ ကျွန်တော့ကို ယနေ့မှစ၍ မသက်ဆိုင်ကြောင်း စွန့် လွှတ် လိုက်ပြီ
ONLINE မှာ ဈေးကြီး ပေးဝယ်နေကြတဲ့ အဆီကျ ရှားစောင်းလက်ပတ်ယို လုပ် နည်း
အခက်အခဲတွေ ကြားထဲက နိုင်ငံ့ဂုဏ်ကို ဆောင်နိုင်ဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားနေတဲ့ မြန်မာ ကိုယ်စားပြု အလှမယ် သူဇာ ဝင့်လွင်
လမ်း​ဘေးမှာ ​တောင်းရမ်း​နေတဲ့​ ကောင်​လေးကို လုပ်ငန်း အရင်းနှီး​ ထောင်​ပေးတဲ့ ​စေတနာရှင်
၁ပတ် အတွင်း သိသိသာသာ ငွေ ဝင်လာစေမည့် ယတြာ
admin · Posted on May 13, 2021
မိန်းမ ၁၆ ယောက်ယူထားပြီး ဘာအလုပ်မှ လုပ်စရာ မလိုဘဲ တစ်ညကို ၄ ယောက်နှုန်းနဲ့ အိပ်ပေး နေရတဲ့ ဇင်ဘာဘွေ အမျိုးသား